Tag: horonantsary mivantana | Martech Zone
Tag: horonan-tsary mivantana
Ahoana ny fomba hampitomboana ny fampiroboroboana ny media sosialy
Alarobia, Aprily 18, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Vao haingana izahay no nizara infographic sy lahatsoratra iray izay nanisy antsipiriany ireo dingana valo handefasana ny paikadin'ny media sosialy. Betsaka aminareo no efa nandefa ny paikadin'ny media sosialy saingy mety tsy hahita firy firy firy araka ny nantenainareo. Ny sasany amin'izany dia mety manivana algorithms ao anatin'ny sehatra. Ny Facebook, ohatra, dia aleonao mandoa vola hampiroboroboana ny atiny toy izay mampiseho azy mivantana amin'ny olona manaraka ny marikao. Manomboka daholo, mazava ho azy,
Alatsinainy Martsa 21, 2011 Alarobia, Oktobra 16, 2013 Douglas Karr
Miasa mafy izahay hanamboarana ny fizotran'ny mpanjifanay. Rehefa manomboka mieritreritra ny ezaka ataon'ny mpivarotra ianao, aiza no tena andanianao fotoana betsaka indrindra? Matetika ny orinasa dia manisy fihenam-bidy na manambany kely ny fotoana tena ilaina handehanana eo anelanelan'ny fizotrany. Vao avy nandefa momba ny fotoana ilainay mba handraisana ireo fitarihana sy isa azo avy amin'ny CRM - ary vokatra iray manamora ny asa. Mety ho izany no ataonao tontolo andro
Asabotsy 9 Febroary 2008 Alakamisy Oktobra Oktobra 31, 2013 Douglas Karr
Tsy mamaky ny olona. Moa tsy zavatra mahatsiravina holazaina izany? Amin'ny maha mpitoraka bilaogy ahy dia manelingelina indrindra izany saingy mila miaiky aho fa tsy mamaky fotsiny ny olona. Mailaka, tranokala, bilaogy, whitepapers, fampahalalam-baovao, takiana amin'ny fampiasa, fanekena fanekena, fe-potoana fanompoana, fahaiza-mamorona…. tsy misy mamaky azy ireo. Sahirana izahay - te-hahazo ny valiny fotsiny izahay ary tsy te handany fotoana. Tsy manana fotoana marina isika. Herinandro marathon ho ahy ity herinandro ity